Thenga futhi uthengise i-BSF yeMaggot nendlela yokuthengisa iMaggot • Yurie BSF
Thenga futhi uthengise i-Maggot BSF nokuthi Ungayithengisa kanjani
Ukuthengiswa kweMaggot ne-Maggot Marketing Method - i-BSF maggot ebhizinisa ibhizinisi noma Thenga i-magg ye-BSF engumlenze noma umlenze wabantu abathile base-Indonesian namanje into engavamile. Ngenkathi bephesheya lapho, leli bhizinisi liye laqhutshwa amashumi eminyaka. Okudingeka ukugcinwa lapho uthenga imbewu ye-BSF yamaggot yilekhwalithi yabalimi, kumele bahlole futhi bahlole ngaphambi kokuthenga umgogodla we-BSF.
Kulabo abangazi futhi bazi izindlela zokulima ukujula kwe-Maggot BSF ngaphandle kokuhogela, ezingqondweni zabo basabonakala bengcolile, bengcolile futhi bephuza. singakhulumi ukufika kwamakhulu ezindiza eziluhlaza eziphethe isifo sezifo.
Ngakho-ke kudingeka ufunde ukutshala okulungile kwamagogane, ngakho-ke ama-fly fly noma i-BSF kuphela epulazini lakho. Umphumela uhlanzekile, awunamathele futhi ngezindleko ezinkulu ezishibhile.
Izimpukane Zezimpi Ezimnyama
I-Famous inezinzuzo eziningi ezinjengokudla kwezinhlanzi, izinkukhu, izilwane ezinwabuzelayo, umhlaba wezokwelapha, amaphoyisa nokunye.
I-Maggot ibhizinisi uma unengqondo mayelana nokugijima ithola amathuba okuthola inzuzo enkulu, ngoba izimakethe ze-niche njengezokudla kwemfuyo, lezi zinombolo ziyinto emnandi, bheka kuphela izinkampani eziningi zezilwane zokudla ezifuywayo e-Indonesia.
Izinkampani eziningi zokuphakelayo ziwuphawu lokuthi ibhizinisi lokudla kwezilwane linenzuzo kakhulu. Uma unesithakazelo sokuqala leli bhizinisi, kufanele wazi kuqala ukuhlaziywa kwebhizinisi.
Ukuhlaziywa kweBhizinisi leMaggot
Ekuhloliseni, kufaka phakathi intengo yembewu, ukukhangisa, izinhlobo zokudla, imithombo yezokuxhumana. Into ebaluleke kakhulu kulokhu ibhizinisi ukuthi akufanele iphunga futhi ukuze bathole inzuzo, abezindaba kumele bavela emfucumfuceni, imfucumfucu noma imfucuza.
Ukuze kubalwe ngokuningiliziwe kokuhlaziywa kwemifino yamaggot kusukela esilinganisweni sokuqala ukuya ekulimeni okukhulu kwamagogane kungacwaningwa lapha> Ukuhlaziywa Kwebhizinisi Lokulima Maggot
Kungani kufanele ukulima umlingo kube mnandi? Ngoba uma iphunga lizomema izimpukane eziluhlaza, futhi ziba yinhlawulo ezoboniswa umndeni nomphakathi ozungezile.
Inqubo yokuhlakulela izimbungu ezingenasiphelo yenza uvikeleke futhi ukhululeke, uvikelekile ngoba ngeke uboniswe umndeni nenduduzo ngoba ibhizinisi lakho lingakwazi ukuqhubeka kuze kube phakade.
Amathemba weBhizinisi Lokulima Maggot
Kunezinzuzo eziningi kumalimi wokulima, okunye okuwukuthi ukuphathwa kulula kakhulu futhi kuthatha amahora amabili ngosuku.
Ngakho-ke ukuqala kwalesi bhizinisi ungakwenza njengobhizinisi ohlangothini lokuqala noma ukulima umlingo omncane. Ukuthuthukiswa kungenziwa ngemuva kwalokho. Ukubala izindleko okudingeka zilungiselelwe zingavula ukuhlaziywa kwebhizinisi lamaggot.
Inhloko-dolobha edingekayo yokukhiqiza imaggot isincane kakhulu, ngoba impahla yalokhu kutshalwa ingasebenzisa izithako ezisele ezitholakala ekhaya. Ukusebenza kwansuku zonke noma izindleko zemithombo yamasiko nazo zishibhile kakhulu ngisho noma zikhululekile.
Kungani kungabizi futhi kuyakhululeka? ngoba izithako ikakhulukazi zisebenzisa imfucuza yemvelo, umquba wemfuyo kanye nemfucuza eyatholakala kakhulu endaweni yethu.
Izakhi eziqukethwe maggot ziphelele kakhulu futhi okuqukethwe kwamaprotheni nakho kuphakeme kakhulu, ukuze kusetshenziswe njengesilwane esiluthole sokudla kwesilwane kanye nokudla kwezilwane zemvelo kuzo zonke izinhlobo zezinhlanzi nezinkukhu.
Inani leMaggot le-BSF
Kuncike kwikhwalithi okumele ithengwe futhi ngenjongo yanini? Uma kusetshenziselwa izinhlanzi noma ezinye izinhlanzi zezilwane ezinhlanzi zihlanganisa nezinkukhu eziphakathi kweRp5.000 - Rp9.000 / kg.
Ngokuqondene nembewu ephakathi kukaRp10.000 - Rp500.000 / kg, kuye ngokuthi izinga. umehluko uyisibonelo sokunakekelwa. Indlela yokuthola imbewu enhle kakhulu ingafika futhi ibone indlela yokuphatha ngayo ngqo.
Noma ngokucela umdayisi ukuthi angayinakekela kanjani imbewu. Uma iphethini lokunakekela linikezwa udoti kuphela, ikhwalithi ayifani. Ikhwalithi enjengale inhle kakhulu ekudleni kwezinhlanzi nezinkukhu. Akufanele isetshenziswe njengembewu.
Khetha abalimi abanolwazi futhi abaningi bathola izincomo ze-LIVE, hhayi nje imibhalo noma ubufakazi obhaliwe. Khetha ngokuhlakanipha imbewu ephakeme ngaphambi kokuphumelela kokulima umlingo.
Amanani ngokuvamile ahambisana ngqo nekhwalithi, kubiza okungcono kakhulu izinga. Kodwa futhi hlola umlimi kuqala!
Indlela ye-BSF Marketing Magical
Kubalulekile kulabo abafuna ukuqala leli bhizinisi, ukuze bafunde kuqala ukuthi bangathengisa kanjani ukuvunwa kwezibungu kamuva. Ngakho uma uqala ngempela maximal ngempela.
Umlimi we-BSF umgogodla ungathengiswa ngalezi zindlela ezilandelayo: * Hamba ngokuqondile kubalimi Bamafama, Izinkukhu, Iziqubuzelayo nokuzilibazisa. Enye indlela ephumelelayo yukuthi uhambe ngokuqondile futhi unikeze abalimi endaweni esiseduze. Thatha izindlela ezizuzisayo nokusebenzisana.
Isibonelo: Mema ukubambisana kwabalimi abasenayo umhlaba kanye nokuhlangenwe nakho kokugcina inhlanzi, kanti ukudla kwethu okukugcoba kunika. Kunconywa ukuthi lesi sivumelwano sokubambisana senziwe isivumelwano esibhaliwe.
Khona-ke kuthiwani uma kungekho abalimi be-catfish noma abalimi bezinkukhu ezizungezile? Uma oseduzane engatholakali, ungayithengisa ngokusebenzisa amathuluzi wezokuxhumana wezenhlalo njenge-Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, i-YouTube noma wenze iwebhusayithi yamahhala.
Ukukhangiswa kweMaggot ye-BSG
Khuthaza I-Maggot Yakho Ibhizinisi.
Thumela ngokuqhubekayo emithonjeni ehlukahlukene yezenhlalo, ungakhohlwa ukuphinda uhlangane namaqembu anezixhumanisi nezinhlanzi nezinkukhu. I-Facebook kufanele usebenzise i-akhawunti yakho, yenza ikhasi lekhasi noma ikhasi.
Ukukhuthazwa kuma-Akhawunti we-Twitter
Singasebenzisa kalula i-media media Twitter ukuze sikhuthaze ibhizinisi lethu. Kodwa kangcono, ikakhulukazi ukukhushulwa nge-Twitter, lungiselela iwebhusayithi yokuqala mahhala. Uma kukhona okuthunyelwe okusha okwabiwe kusukela kuwebhusayithi esiyidalile.
Amaphromoshini kuma-Akhawunti we-Instagram
E-med SOS lena idume ngezinga layo lokuvala eliphakeme ngokuqhathaniswa ne-akhawunti ye-Facebook, Mhlawumbe ngenxa yokuthi abantu base-Facebook bayisebenzisa kakhulu njengethuluzi lokuxhumana komphakathi, kuyilapho ku-Instagram kunamabhizinisi amaningi.
Le ndlela, nakuba "eyinkimbinkimbi" encane kodwa yimpahla yebhizinisi lethu, kodwa imiphumela yesikhathi eside yinto enhle kakhulu, ngaphandle kwalokho futhi njengethuluzi lokukhulisa ukuzethemba kwabathengi bebhizinisi esizogijima.
Uma unenhlanhla, ngalewebhusayithi yezokuxhumana ungakhanga amakhasimende angakhona avela phesheya kwezilwandle, empeleni avame ukuhleleka ngobuningi futhi intengo ingaba ngcono kunezimakethe zendawo.
Ukwenza iwebhusayithi manje kulula futhi engabizi, ngisho noma usebenzisa izakhiwo ezivela ku-Google, njenge-blogspot ne-Google ibhizinisi lami, kokubili yi-100% mahhala. Izibonelo zokukhushulwa mahhala ku i-google blogspot
Ukukhuthazwa ngokwenza i-Online Store
Kunezinsizakalo eziningi kakhulu ezinikezela ukwenza izitolo ze-intanethi kusukela ezishibhile kuya kwalezo ezihloniphekile. Wena nje ukhetha ngokusho kwesabelomali sakho. Le ndlela isendaweni ye-google "amasevisi okwenza isitolo online"
Khetha ngokucophelela, ezinye zazo zilungile, ezinye ziphinde ziqaphele. Yehlisa phansi futhi ubuze okuningi, cela iziphakamiso ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzilungiselele. Ungakhethi izinsizakalo ezingakwazi ukunikeza izeluleko ezingcono kakhulu esitolo se-intanethi azosisebenzela zona.
Ezinye izindawo zokugqugquzela
Ungasebenzisa amasayithi afana ne-OLX, Tokopedia, nabanye. Vula amasevisi wokuqeqesha ibhizinisi lokulima umlingo. Ukuze ibhizinisi lethu le-maggot likhule ngokushesha, isu lethu kufanele liphinde libe nobuciko futhi liyingqayizivele, enye yalo ukuvula insizakalo yokuqeqeshwa kwebhizinisi lokulima ngamaggot, kungani lokhu kuqakathekile ???
Ukwethula emphakathini jikelele ukuthi ungomunye wamabhizinisi okulima umlingo. Ngokuqeqesha leli bhizinisi kuzokwenza ukuthi ibhizinisi lakho lisakaze ngokushesha kokubili edolobheni nasaphandle kwedolobha.
Ibhizinisi lakho lizokwaziwa ngokudlula ngoba lisizwa yibo abaye banikezwa ukuqeqeshwa kwebhizinisi. Ukukhuthazwa kwebhizinisi lomlomo kuyasebenza kakhulu uma kuqhathaniswa nokukhuthazwa ngokusebenzisa abezindaba.
Iwusizo kwabanye. Ungakhathazeki uma labo oye baqeqesha baqhubeka befuna ukuqhuba ibhizinisi lokulima Maggot. Mhlawumbe ngisho nabaqeqeshwayo bazoba ngabalingani bakho ngolunye usuku. Lokhu okusemandleni kwebhizinisi kusekukhulu kakhulu kunikezwe izidingo eziqhubekayo nokunikezwa okulinganiselwe.
Ukuqeqeshwa kwezebhizinisi kwasekuqaleni kuphela ngezinhloso zenhlalo, kepha kamuva kungaba ukwesekwa noma ukuqeqeshwa kwebhizinisi / isisusa emkhakheni wokulima umlingo.
Ukuvula ukuqeqeshwa kwebhizinisi lokulima Maggot akudingi izindleko ezengeziwe, ngoba ekulungiseleleni ulungele futhi usebenza njengenjwayelo. Wena kuphela uchaza indlela efanele nesinyathelo, okufanele kwenziwe kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni.
Thengisa Imbewu Yamaggot
Indlela Yokukhetha Imbewu Yamaggotha ​​Asezingeni Eliphakeme Neliphilile. Uma ukhetha imbewu yemaggot yokuzalanisa noma ukulima, kufanele ukhethe imbewu ephakeme futhi enempilo.
Lokhu kungenxa yokuthi imbewu ephakeme izokhiqiza izimpungushe eziningi ze-BSF / izimpethu. Ngencazelo, imbewu enhle isosha elimnyama lihamba imbewu enempahla ephakeme, okungukuthi iyakwazi ukubonisa uhlobo lomzali wangempela futhi ibe nokuqukethwe okunomsoco ophezulu ukuze kube nokubiza okuphezulu kwezomnotho, futhi kungaguli.
Lokhu kungabonakala ngokucela abalimi ukuthi banakekele kanjani nokuthi banjani ukudla okunikezwa imbewu ngesikhathi sokunakekelwa kwabo kusukela ebuntwaneni ukuba babe yi-BSF.
I-BSF Maggot ifana nanoma yisiphi esinye isilwane okufanele sithole ukondla okwanele ngesikhathi sesondlo. Engeza izakhi zomzimba ekuqaleni kokulungiswa kwemidiya okusiza ukukhuthaza i-BSF ukuba ihlanganyele futhi ibeke amaqanda.
Izinzuzo zembewu ephakeme
Ukukhiqizwa okuphezulu futhi hhayi ukubulawa kalula
Ukushayela ngokushesha kwizimpukane ze-BSF / BSF
Amazinga okufa okuphansi kwezimpungushe
Izinga lezinga leqanda le-BSF liphakeme phakathi kwe-500 kuya ku-900 umsila womsila ngeqanda elilodwa
Une-larva enkulu noma enkulu noma i-maggot
Ukulwa nezinambuzane nezifo, ikakhulukazi ngesikhathi sesisana esingaphansi kweviki
Izakhiwo eziphakeme zezinhlobo ze-BSF ezingenhla zingagcinwa izakhi zofuzo uma imbewu ye-BSF isakazwa.
Ngokucacile lapho uthenga imbewu ye-BSF evelele izokhiqiza i-larva / umgogodla kahle ngonyaka wonke, into esemqoka ukuvuna ngokushesha i-18 ngosuku kuphela ku-30 yansuku zonke
Imbewu ephakeme nayo iphikisana nezimo ezimbi kakhulu zemvelo, ikakhulukazi uma isanda kukhishwa kuze kube sekupheleni kweviki elilodwa nangaphezulu, isakazwa kalula ngenxa yezinga eliphansi lokufa kwembewu, ukukhula okusheshayo nokuphendula umkhuba wezolimo zokulima.
Uma ubuncane be-85% bugcwalisekile uhlobo oluphezulu lohlu olungenhla, isosha elimnyama lihamba imbewu libhekwa njengeliphakeme. Uma ingahlangabezane nezidingo ze-85% ezingenhla, khona-ke imbewu ye-BSF ihlelwa njengejwayelekile.
Ukunikeza okuphakelayo okwakhiwe
Imbewu ephezulu: i-uniforms enkulu enkulu ye-2cm
Ubuningi benyama: obukhulu
Ukuhamba: ukuhamba okusebenzayo
Umbala wembewu: omnyama
AmaRoma: ayikho iphunga